बंगलादेशमा किन भइरहेको छ मोदीको विरोधमा प्रदर्शन ? – ramechhapkhabar.com
बंगलादेशमा किन भइरहेको छ मोदीको विरोधमा प्रदर्शन ?
आगामी शुक्रवार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बंगलादेश भ्रमणमा जाँदैछन् । तर उनी जानुपूर्वनै त्यहाँ भने विरोध भइरहेको छ । तर बंगलादेशका विदेशमन्त्री एके अब्दुल मोमेनले शनिवार केही मानिसले विरोध गर्दैमा चिन्तित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । ‘केही मानिसले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ढाका भ्रमणको विरुद्धमा अभियान चलाइरहेका छन् तर चिन्ता गर्नुपर्ने केही कारण छैन,’उनले भने,‘बंगलादेश एक लोकतान्त्रिक देश हो जहाँ नागरिकलाई अभिमतको स्वतन्त्रता छ ।’
ढाका ट्रिब्यून, द डेली स्टार लगायका सञ्चारमाध्यमहरुले मोदीको भ्रमणका बारेमा भइरहेको विरोधलाई लिएर कुनै चिन्ता लिनु नपर्ने उनको भनाइलाई प्रकाशन गरेका छन् ।
कसले गरिरहेको छ विरोध ?
समाचार एजेन्सी एपीका अनुसार शुक्रवार बंगलादेशको राजधानी ढाकामा मुसलमानहरु र विद्यार्थी संगठनहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणलाई लिएर ¥याली निकालेका थिए ।
मोदी बंगलादेशको स्वतन्त्रताको ५० वर्षको अवसरमा बंगलादेश जाँदैछन् । सन् १९७१ मार्च २६ मा बंगलादेशले पाकिस्तानबाट आफूलाई स्वतन्त्र घोषणा गरेको थियो । भारतको सहयोगमा नै बंगलादेशले ९ महिनाको रक्तपातपूर्ण युद्धपछि नयाँ मुलुक बनेको थियो ।
शुक्रवार करिब ५ सय मुसलमानले ढाकामा मोदीको विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले मोदी विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए भने वामपन्थी रुझान भएको विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्ताले ढाका विश्वविद्यालय अगाडि मोदीको विरोधमा नाराबाजी गरेका थिए । मोदी बंग्लादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसीनाको निमन्त्रणमा ढाका जान लागेका हुन् ।